२०७८ असार महिना तपाईंको लागि शुभाशुभ कस्तो रहला ? Horoscope the month of Asaar 2078. | Mero Jyotish
२०७८ असार महिनाको मासिक राशिफल
मासिक राशिफल (२०७८ असार महिनाको राशिफल)
मेष राशिका लागि यो महिना सुखद् रहनेछ । कार्यउन्नतिका साथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल रहनेछ । आर्थिक उन्नतिका साथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ । मित्र सुख मिल्नेछ । शत्रु पक्ष दुर्वल देखिन्छन् । नयाँ कार्य गर्ने उत्साह मनमा छाउनेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् । प्रेममा पारख बढ्नेछ । आय आर्जनका स्रोत बढ्नुका साथै सन्तति सुख पनि प्राप्त हुने देखिन्छ । विद्या एवं स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल रहनेछ । कला साहित्यका साथै सांगीतिक क्षेत्रमा पनि विशेष संलग्नता रहने महिनाको राशिफल रहेको छ ।
वृष राशिका लागि यो महिना फलदायी रहनेछ । महिनको पूर्वाद्र्धमा शत्रुपक्ष सबल रहनेछन् । कार्यक्षेत्रमा पनि केही संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायिक दृष्टिले महिनाको उत्तराद्र्ध लाभदायी रहनेछ । धातुजन्य वस्तु लाभदायी रहनेछन् । विद्याको क्षेत्र सफल रहनेछ । कला सृजनाका साथै अध्ययनमा विशेष संलग्नता रहनेछ । वाक्कलामा वृद्धि देखिन्छ । धातुजन्य वस्तु यो महिना लाभदायी रहनेछन् । आफन्त जनबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा भने सजगता अपनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
मिथुन राशिका लागि यो महिना उन्नतिदायी रहनेछ । विशेष यात्राका योग देखिन्छन् । वृत्ति लाभका साथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहनेछ । भौतक वस्तु लाभदायी रहनेछन् । गृह सुख मिल्नुका साथै धार्मिक कार्यमा अधिक संलग्नता रहनेछ । आध्यात्मिक दृष्टिले पनि महिना सुखद् देखिन्छ । प्राज्ञिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ । शत्रु पक्ष भने यो महिना सक्रिय रहनसक्नेछन् । कार्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ । प्रेमका दृष्टिले भने यो महिना उन्नतिदायी नै रहने देखिन्छ ।
कर्कट राशिका लागि यो महिना मिश्रित रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा संघर्षका साथै खर्चमा पनि वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ । महिनाको उत्तराद्र्धबाट समय सुखद् बन्दै जानेछ । सामाजिक कार्यमा रुचि रहनेछ । बोलिको विशेष प्रभाव रहनुका साथै राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलताका साथै कला साहित्यमा विशेष आकर्षण रहने देखिन्छ । पारिवारिक सुख मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा भने सजग रहनु नै उचित रहनेछ । प्रेम जीवन यो महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ ।
सिंह राशिका लागि यो महिना सुखद् रहनेछ । आर्थिक उन्नतिका सथै कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल रहनेछ । आर्थिक वृद्धिका परिसूचकहरू देखा पर्नेछन् । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र फलदायी रहनेछ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । धार्मिक सामाजिक कार्यमा विशेष रुचि जाग्नेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै सन्ततिप्रेम बढ्नेछ । प्रेम जीवन पारखिलो रहनेछ । सम्बन्धमा पनि प्रगाढता थपिनेछ । जलीय वस्तुबाट विशेष लाभ रहने यो महिनको राशिफल रहेको छ ।
कन्या राशिका लागि यो महिना उल्लेख्य रहनेछ । कर्मप्राप्तिका योग देखिन्छन् । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथै नयाँ कार्य योजनमा मन अग्रसर रहनेछ । विद्याको क्षेत्र पनि यो महिना उन्नत रहनेछ । शत्रु निर्वल रहनेछन् । कीर्ति वृद्धि हुनुका साथै कार्योन्नतिका योग पनि देखिन्छन् । पारिवारिक साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ । धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र पनि सफल नै देखिन्छ । आयमा वृद्धिहुने यो महिनाको राशिफल रहेको छ ।
तुला राशिका लागि यो महिना फलदायी रहनेछ । कार्यक्षत्रेमा संघर्ष गर्नुपरे पनि प्रतिफल सुखद् रहनेछ । आर्थिक पक्ष सबल देखिन्छ । वाक् क्षेत्रमा भने संयम अपनाउनु नै उचित हुनेछ । शत्रु पक्षको सक्रियताले कार्यमा अधिक समय खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । कला साहित्यको क्षेत्र उत्तम रहनेछ । कलाका क्षेत्रमा विशेष रुचि जाग्नेछ । यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन् । आफन्तजनबाट पनि विशेष लाभ हुने देखिन्छ । सामाजिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ । प्रेममा पारख रहनुका सृजनात्मक कार्यमा संलग्नता रहने महिनाको राशिफल रहनेछ ।
वृश्चिक राशिका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ । आफन्तजनबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्राज्ञिक क्षेत्र यो महिना लाभदायी रहनेछ । बौद्धिक कार्यमा संलग्नता रहनुका साथै कला सृजननमा पनि सफलता मिल्नेछ । सन्तान सुख मिल्नुका साथै उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा अधिक संलग्नता रहने देखिन्छ । भौतिक वस्तु मध्यम फलदायी रहनेछन् । शत्रु पक्ष सबल रहनुका साथै खर्चमा पनि वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।
धनु राशिका लागि यो महिना यात्रादायी रहनेछ । कार्य प्राप्तिका साथै आर्थिक उन्नतिका योग पनि देखिन्छन् । भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् । व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथै जलीय वस्तु विशेष लाभदायी रहनेछन् । राजनीतिक क्षेत्र पनि यो महिना उन्नत नै रहनेछ । बोलीमा ओज बढ्नेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम देखिन्छ । जलीय वस्तुबाट सजग रहनु उचित हुनेछ । धार्मिक कार्यमा पनि चाख बढ्नेछ । प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिनाको उत्तराद्र्ध सुखद् रहने देखिन्छ ।
मकर राशिका लागि यो महिना फलदायी रहनेछ । बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ । व्यापार बढ्नुका साथै व्यवसायबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ । वाक्कलामा वृद्धि हुनेछ । शत्रु पक्ष निस्तेज रहनेछन् । मित्र जनबाट साथ सहयोग मिल्नुका साथै नयाँ कार्यमा संलग्नता रहनेछ । आफन्त एवं परिवारजनबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र फलदायी रहनेछ । कला साहित्यमा पनि संलग्नता रहनेछ । स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने मासिक राशिफल रहेको छ ।
कुम्भ राशिका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ । धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ । पराक्रम बढ्नुका कार्य प्राप्तिका योग देखिन्छन् । मित्र जनको साथ सहयोग मिल्नुका साथै उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुनेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । पे्रम जीवन मध्यम फलदायी रहनेछ । महिनको पूर्वद्र्ध कार्य प्रकृतिका दृष्टिले संघर्षदायी रहनेछ । शत्रु पक्षको प्रभावले कार्यमा विलम्ब गराउन सक्नेछ । स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु उचित हुनेछ ।
मीन राशिका लागि यो महिना फलदायी रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा संघर्ष गर्नुपरे पनि परिणम सुखद् नै रहने देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथै कार्य क्षेत्रमा सफलता हात पर्ने देखिन्छ । भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् । मित्र सुख मिल्नुका साथै प्रेममा पनि पारख बढ्नेछ । शत्रु पक्ष भने सबल रहनसक्नेछन् । स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ । शीतजन्य वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ । कला साहित्यमा भने महिना सफल रहनेछ । महिनाको उत्तराद्र्धबाट कार्यप्राप्तिका साथै आर्थिक वृद्धिका हुने महिनाको राशिफल रहेको छ ।